Al-Shabaab Oo Sheegtay Inay Dib Ula Wareegtay Deegaan ay Ciidamada Somaliya horey ugala wareegeen. – Kismaayo24 News Agency
by admin 14th January 2020 0127
Wararka aan ka heleyno deegaanka Tooratooroow ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas ay isaga baxeen Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab, kadib markii shalay halkaas la wareegeen.
Ciidamada Danab ayaa Al-shabaab kala wareegay gacanta ku heynta deegaanka Tooratooroow oo ay in muddo ah ay ku sugnaayeen, isla markaana ku lahaa Maxkamado waaweyn.
Ciidanka Danab ayaa Tooratooroow qabsaday iyada oo wax dagaal ah uusan ka dhicin, waxaana markii hore halkaas isaga baxay dagaalamayaashii Al-shabaab ee ku sugnaa, sidaasina ay Ciidanka dowladda ugu suura-gashay inay la wareegaan.
Sawrirro laga soo qaaday Ciidanka dowladda laguna faafiyay baraha Bulshada ayaa lagu arkayay iyaga oo ku sugnaa deegaanka, isla markaana shacab badan kula hadlayay halkaas.
War qoraal ah o lagu faafiyay baraha internet-ka Al-shabaa waxaa ay ku sheegeen in Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Danab ay isaga baxeen deegaaanka Tooratooroow ee Gobolka Shabeellaha Hoose oo shalay ay la wareegeen.
Sidoo kale Warka Al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidanka dowladda Federaalka ay dib ugu laabteen dhanka Garoonka Balidoogle oo markii horey ay kasoo ruuqaansadeen, isla markaana Al-shabaab ay dib u qabsadeen Tooratooroow.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dwladda Federaalka Soomaaliya oo ay uga hadlayaan wararka sheegaya in Ciidamada ay isaga baxeen deegaanka Tooratooroow ee Gobolka Shabeellaha Hoose, sidoo kalena ay la wareegeen dagaalamayaasha Al-shabaab.
AKHRISO: Xiliga la dooranayo Gudoonka Barlamaanka Galmudug oo lasoo saaray.
Daawo: Sawirro Hordhac ah oo naga soo gaaray Xarunta Golaha Shacabka oo qaban qaabadii ugu dambeeysay Doorashada Guddoonka Baarlamaanka ay ka socoto
DEG DEG: Al- Shabaab oo qabsaday Dagmada Badhaadhe.
admin 26th January 2016 26th January 2016